गुगलमा महिलाहरू ? - साइन्स एण्ड टेक्नो - साप्ताहिक
गुगलमा महिलाहरू ?
भाद्र १५, २०७४
गुगलका प्रयोगकर्तामा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ । आखिर महिलाहरू गुगल सर्च इन्जिनमा के–के खोज्छन् त ? तथ्यांकअनुसार महिलाले गुगलमा सबैभन्दा बढी खोज्ने विषय अर्थात् विधा सौन्दर्य प्रसाधनसम्बन्धी जानकारी हो । गुगल सर्चमा ब्युटी प्रोडक्टका विषयमा खोजी गर्ने क्रम बढीरहेको छ ।
त्यस्तै खाना खाने ठाउँ अर्थात् होटल रेस्टुराँ अनि मनोरन्जनका साधनहरूका बारेमा जानकारी खोज्ने महिलाहरूको संख्या पुरुषहरूको तुलनामा बढी छ । गुगल सर्च इन्जिनमार्फत पोर्न सामग्री खोज्ने महिलाहरूको संख्या पनि निकै बढिरहेको पाइन्छ । ४ करोड प्रयोगकर्ता भएको पोर्न हबका अनुसार गुगल सर्च इन्जिनमार्फत पोर्न सामग्री खोज्ने पोर्न पारखीहरूमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य छ ।
गुगलमा हेल्थ तथा फिटनेससम्बन्धी आलेख तथा जानकारी खोज्ने मामिलामा पनि महिलाहरूको निकै अघि छन् । त्यस्तै महिलाहरूले गुगल सर्च इन्जिनमार्फत विभिन्न परिकारका बारेमा पनि खोजिनीति गर्ने गरेका छन् । गुगलको रिपोर्टअनुसार गुगलमा बढी समय बिताउने मामिलामा ३५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका महिला कुनै पनि उमेर समूहका पुरुषभन्दा अगाडि छन् । त्यस्तै १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू बढी इन्टरनेट चलाउने मामिलामा अगाडि छन् ।
प्रकाशित :भाद्र १५, २०७४
चर्चित अविवाहित महिलाहरू
तीजमा महिलाहरू व्रत बसेका बेला पुरुषहरूले के गर्नुपर्ला ?
माइक्रोसफ्ट मिटिङ रुम जेष्ठ १०, २०७५
आगलागी नियन्त्रण गर्ने सुट जेष्ठ ८, २०७५
मंगल ग्रह प्रस्थान गर्‍यो इनसाइट जेष्ठ ८, २०७५
एन्ड्रोइड पी जेष्ठ ७, २०७५
स्मार्टफोन चार्ज हुने माउस प्याड जेष्ठ ५, २०७५
ओपेरा टच जेष्ठ ४, २०७५
इन्टेलले ल्यायो सर्बाधिक तीव्र प्रोसेसर जेष्ठ ३, २०७५
अब सेल्फी स्टिक होइन गिकोस्टिक जेष्ठ १, २०७५
रोबोट डगको सामूहिक अन्त्येष्टी वैशाख ३१, २०७५
कनेक्टेड होम र एप्लायन्सेज वैशाख २७, २०७५